News - DuckerFrontier: Inye onwe ya nke aluminom na-eto 12% site na 2026, na-atụ anya mmechi ndị ọzọ, fenders
Ọmụmụ ihe ọhụrụ nke DuckerFrontier maka Aluminium Association na-eme atụmatụ na ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe ga-etinye 514 pound nke aluminom n'ime ụgbọ ala nkezi site na 2026, mmụba 12% site na taa.
Mgbasa ahụ nwere nnukwu ihe dị mkpa maka mmezi nkwekọrịta, ebe ọ bụ na a na-atụle ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ n'ahụ iji mee mgbanwe dị ukwuu na aluminom.
Ka ọ na-erule afọ 2026, ọ ga-afọ nke nta ka ọ bụrụ na mkpuchi bụ aluminom, na nso ego ọbụlagodi ma ọ bụ ọdụ ọdụ ga-abụ, dị ka DuckerFrontier si kwuo. Nwere ihe gbasara 1-in-3 ohere na ihe mkpuchi ma ọ bụ ọnụ ụzọ ọ bụla nke ụgbọ ala ọhụrụ ga-abụ aluminom.
Nke ahụ adịghịkwa abanye na mgbanwe nke ihe eji arụ ọrụ iji mepụta arụmọrụ ka ukwuu na ụgbọ ala nwere gas ma ọ bụ jikwaa batrị nke ụdị elektrik.
“Ka nrụgide ndị ahịa na nsogbu ndị metụtara gburugburu ebe obibi na-abawanye — etu ahụkwa ka e si eji aluminom arụ ọrụ. Ihe a choro na-aga n'ike n'ike dika obere carbon, ike aluminom di ike na enyere ndi na-akpo ugboala aka imeghari uzo ohuru ohuru, anyi na enwe obi uto na ikike nke igwe a na ngwa ngwa ugbo ala eletrik, "Onye isi oche njem nke Aluminium Ganesh Panneer ( Novelis) kwuru na nkwupụta nke Ọgọstụ 12. Dika ugbo ala eletrik na-adiwanye ebe nile, ihe ka ukwuu nke aluminom iji gbasaa ma nyere aka idozi ibu batrị na ugwo ga eme ka ndi n’enye ahia gha enwe ike ichoputa ugbo ala na ugbo ala ndi di nchebe, ihe eji egwu ma dicha mma . ”
DuckerFrontier kwuru na ụgbọ ala dị na 2020 kwesịrị inwe ihe dị ka kilogram 459 nke aluminom, "ụgbọ ala n'ihi mmụba nke mpempe akwụkwọ akpaaka (ABS), na mgbatị aluminom na extrusions, na-akwụ ụgwọ akara nchara."
Shock Absorber Rubber, Hood Shock Absorber, Taya Ball Joint, N'iru n'iru Knuckle, Shock Absorber kpọchie, Ogige Ulo,